Abuur buraashyo Photoshop adiga kuu gaar ah | Abuurista khadka tooska ah
ka burush Photoshop Waxay si ballaaran u isticmaalaan farshaxanno garaafyo ah oo raba inay ku dabaqaan faahfaahin yar oo degdeg ah shaqadooda garaafka ah. Laga soo bilaabo burushyada faahfaahinta yar yar illaa burush aad u adag, bixinta noocan ah ilaha ilaha internetka waa mid aad u ballaaran (qaar ka mid ah soo dejinta Halkan). Abuur burushyo Photoshop ah dhakhso, tani waa saaxiib weyn marka ay timaado kor u qaadida hal-abuurka maxaa yeelay waad awoodi kartaa kula shaqee ilahaaga hal abuur leh.
Abuur burush kuu gaar ah gudaha Photoshop ayaa ku caawin doona waqti ka ilaali mashaariicdaada garaafka isla markaa aad maamusho si aad u abuurto maktabad burush kuu gaar ah. Abuur burushyo gaar ah Mashruucyadaada garaafka ah, u adeegso saxeexaaga farshaxanka sidii inuu yahay burush, isku dar nooc kasta oo burush ah si aad u gaarto wax gebi ahaanba cusub. Burushku waa kheyraad muuqaal ah oo aynaan waligeen ilaawin.
Waan awoodnaa abuur burush leh walxo garaaf ah:
Fursadaha burushku waa kuwo aan xad lahayn awood u leh inuu wax abuuro qaabab, qaabab iyo waxyaabo kale oo badan oo muuqaal ahaan soo jiidasho leh.
Waxa kaliya ee aan u baahanahay inaan ku abuurno burush waa inaan yeelano cunsur muuqaal ah oo aan ugu rogo burush.
para abuur burush sawir leh waxa aan sameyno waa xulashada kaliya sawirka adoo riixaya xakamee guji badan lakabka sawirka. Taas ka dib, waxa xiga ee ah inaan sameyno waa inaan aadno liiska ugu sarreeya oo aan dooranno tafatir / qeex qiimaha burushka, halkan waa halka aan ku ilaalino burushkayaga.
Goor dambe waxa kaliya ee ay tahay inaan sameyno si aan u isticmaalno burushkeenu waa ka hel buugga buugga burushka ee Photoshop. Waan abuuri karnaa burush leh saxeexayaga farshaxanka oo si dhakhso ah ugu codso. Dadka qaar waxay isticmaalaan noocan ah burush loogu talagalay calaamadaha calaamadaha shuqulladaada sawirka.
Daqiiqado gudahood ayaad awoodaa abuur burush kuu gaar ah una isticmaal dhammaan shaqooyinkaaga garaafka ah. Tijaabi iyaga oo ku raaxee abuurista.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Abuur burushyo Photoshop ah
Wacom Clipboard, wuxuu u rogaa dukumiintiyada waraaqaha qaab dijitaal ah waqtiga dhabta ah
Abuur sawir-qaadis macquul ah adoo adeegsanaya Photoshop